UKUTYA OKUQHELEKILEYO OKUTYEBISAYO- PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Ukutya okuqhelekileyo okubangela ukuba i-FAT engafanelekanga
Ekhaya Impilo Impilo-ntle Wellness oi-Amritha K Ngu UAmritha K. ngo-Okthobha 19, 2020
Unokufumana ubunzima ngenxa ye-thyroid engasebenzi, uxinzelelo, ukudinwa, ukugcinwa kwamanzi kunye nezinye izizathu. Uninzi lwabantu ngokuthe ngcembe lutyeba njengoko bekhula okanye besenza utshintsho kwindlela yabo yokuphila.
Ngaphandle kwezi zizathu ezininzi, esona sizathu sixhaphakileyo sokufumana ubunzima yindlela otya ngayo-ukutya kakhulu iikhalori ukuba zichane  . Ngelixa ukufumana ubunzima kunokuba sempilweni, ukugqithisa, kunye nokusetyenziswa rhoqo kokutya okunomxholo wekhalori ephezulu kunokukhokelela ekufumaneni ubunzima bomzimba.
Inani lokutya okunamafutha okwenza ukuba utyebe alinakuphela sihlangana (okanye sitye) oku kutya kwiintsuku ezininzi. Nalu uluhlu lokutya okunamafutha kakhulu.
Ngelixa kukho ii-ice cream ezinamafutha asezantsi kunye nee vegan, ii-ayisikhrim eziqhelekileyo okanye ezentengiso ezenziwe zipakishwe ngeswekile kwaye zinomxholo onamafutha aphezulu [Mbini] . Enye yeedessert ezithandwa kakhulu, ii-ayisikhrim zityebisa kakhulu-ke kokona kulungileyo kukuzonwabisa njengonyango ngamanye amaxesha hayi njengesiqhelo kwizidlo zakho  .
Hayi, asithethi nge-pizza eyenziwe ekhaya onokuyenza ngezinye iindlela ezisempilweni- kodwa i-pizza ethengwe ngevenkile / ye-takeaway enikezwe isihloko 'sokutya okungafunekiyo okuthandwa kakhulu.' Ii-pizza o-odola ziphezulu kunamafutha, ii-carbs ezicociweyo kunye neekhalori. Ukongeza koku, kuxhomekeke kuhlobo lwe-pizza oy-odayo, inokubandakanya isixa esikhulu seshizi kunye nenyama esele yenziwe  . Izifundo zidibanisa ukusetyenziswa kwezi zinto zokutya kukutyeba kunye nomngcipheko okhulayo weemeko zempilo ezichaseneyo nezifo zentliziyo  .
Ayithandabuzeki into yokuba iidonati ziyatyeba. Iidonathi ziqulathe iswekile eninzi, umgubo ocoliweyo kunye namafutha ongezelelweyo  . Iphezulu kakhulu kwiikhalori, ii-donuts ziqulathe isixa esikhulu se-trans-fat, ngamafutha angenampilo.
Iipakethe ezintandathu zesicwangciso sokutya
4. IiFries zaseFransi
Ayisiyiyo nje iifry, kodwa iitshiphusi zakho ozithandayo ziyabandakanywa kuluhlu lokutya okunamafutha kakhulu  . Ezi zidlo zidliwayo zidla ngokutyiwa kunye neesosi ezineswekile ephezulu njenge ketchup, emema ukuphinda-phinda ingxaki. Izifundo ezininzi ziye zadibanisa iifriji zaseFransi kunye neetapile zetapile ngokuthe ngqo ekuzuzeni ubunzima  .
5. Ubisi weTshokholethi
Ngokungafaniyo nomzala wayo itshokholethi emnyama, itshokholethi emhlophe ayikhuthazi ukunciphisa umzimba kodwa yona, inokukhokelela ekuzuzeni ubunzima. Iitshokholethi zobisi zihlala ziphezulu kwiswekile kunye namanqatha kwaye zinomlutha ngandlela ithile, zikwenza utye i-2-3 bar kwindawo yokuhlala .
6. Ibhotolo yamandongomane
Ngelixa ukusetyenziswa kwe-peanut butter eyenziwe ekhaya kusempilweni, ibhotolo yamandongomane elungiselelwe ukuthengisa equlathe iswekile, ioyile yemifuno enehydrogen, kunye neetyuwa ezininzi zinokukwenza utyebe  . Ibhotolo yamandongomane ikwanayo nenani eliphezulu lekhalori, kodwa esinye isizathu esenza ukuba kube kokunye ukutya okuxhaphakileyo okubangela ukutyeba kakhulu (ukuba kusetyenziswe kakhulu).
7. Isoda (Iziselo eziswiti ezinencasa)
Iingcali ngezondlo zithi ii-sodas ezinencasa, ezineswekile zinokuthathwa njengezona zinto zityebileyo zokutya [Shumi elinanye] . Ayisiyo kuphela iisoda, iti eswiti, iziselo zejusi, iziselo zekofu kunye nezemidlalo zeziselo eziphezulu kwiswekile kunye nemithombo ephezulu yeekhalori phakathi kokutya okungenamsoco.  . Ukusela isoda akunokwandisa umngcipheko wokutyeba kuphela kodwa kukwachwetheza isifo seswekile kunye nesifo sentliziyo  .
Ngelixa ii-cookies zimnandi ukuba zi-munching ngelixa usebenza okanye kwi-Netflixing, zinokuphakama kakhulu kwiikhalori  . Ungabhaka ezinye iicokies ekhaya okanye uye kwincinci encinci, enika inkonzo enye (ii-cookies eziyi-1-2).
9. Ijusi yeziqhamo
Ewe zisempilweni kodwa zinokubangela ukutyeba okungafunekiyo xa zisetyenziswa kakhulu [Shumi elinantlanu] . Iijusi zeziqhamo ezithengiweyo ezivenkileni zinomxholo weswekile owongeziweyo kunye nokuswela ifayibha kunye nezinye izakha mzimba ezifumaneka kwiziqhamo ezipheleleyo.
10. Inyama ezilungisiweyo
Ngezinye iintsuku ukugcada isoseji kunokunceda ukongela ixesha, kodwa ekuhambeni kwexesha, ezi zinto zibangela iingxaki zempilo ezininzi, ngokufumana ubunzima obunobunzima obugqithisileyo.
Olunye ukutya okunokukwenza ukuba ufumane amanqatha angenampilo zezi zilandelayo:
Ukutya okuziinkozo okuphantsi kweekhalori
Ewe, ukusetyenziswa kakhulu kokutya akukho nto ilungileyo. Ababeki bunzima kufuneka balumke ukuba batye ntoni kuba ukutya okunje kuya kongeza kwiiponti, ekuya kuba nzima ukuzilahla kamva. Lawula okanye unciphise ukusebenzisa kwakho oku kutya ukunqanda ukutyeba ngequbuliso, okungenampilo.
indlela yokulahla iintloko ezimnyama ngokukhawuleza
Iingcebiso zobuhle zasekhaya ngolwimi lwesiMarathi
indlela yokufumana shani dev iintsikelelo
indlela yokunciphisa iintlungu zomqolo ngokwendalo
dimple kwisidlele sasekunene esithetha ngeenkwenkwezi
iyoga okanye umthambo obhetele
ukuba wenzeni xa uziva uphantsi